धातु ढोका र विन्डोज मेटल लेजर काटनेको मेशिनका लागि नयाँ हतियार
परम्परागत धातु ढोका र विन्डोज चिसो र सुस्त छन्। लेजर खाली खाली तत्व वास्तु सजावटमा एकीकृत हुन्छन् जसले ढोका र विन्डोहरूलाई सँधै परिवर्तनमा पार्दछ, जसले मानिसहरूलाई रमाईलो अनुभव दिन्छ! धातु लेजर काट्ने मेसिन धातु प्रसंस्करण उद्योगमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
फाइबर लेजर काट्ने मेशिनको संचालन कत्तिको कुशल छ?
सामग्री प्रसंस्करण र उत्पादन कार्यहरूको क्रममा, उत्पादन उत्पादन आवश्यकताहरू पूरा गर्न, बिभिन्न सामग्रीहरूलाई केहि विशिष्टताहरू काट्नु आवश्यक हुन्छ ताकि ती उत्पादनहरू अर्को उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग गर्न सकियोस्। त्यसकारण, यी उत्पादन र प्रशोधन उद्योगहरूमा, यो आवश्यक छ ...